Wararkii ugu dambeeyay Qarax lagu laayay Ciidamo oo ka dhacay Sh/Dhexe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qaraxaan oo ahaa miino dhulka lagu aasay oo laga hagayey Remote Control ayaa Duhurnimadii Maanta waxaa uu ka dhacay deegaan ku yaalla duleedka degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe, sida aan wararka ku helnay.
Gaari Tikniko ah la socdeen Ciidamo ka tirsan dowladda Federaalka ayaa waxaa qaraxaas lagula eegtay xili uu marayay tuulada Gololey oo hoostegta Balcad, waxaana jugtiisa laga maqlay gudaha degmadaas.
Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu warramayaa inuu ka dhashay qaraxa oo soo gaaray inta badan Ciidankii saarnaa gaariga, waxaana ka hadlay qaraxaas dagaalamayaasha Al-shabaab.
Warar Shabaab ay ku qoreen barahooda qadka ayey ku sheegeen in qaraxa la beegsadeen Ciidanka Milateriga dowladda, isla markaana ay ku dileen 5 Askari, ayna ka furteen 4 qori iyo booshashkooda.
Sidoo kale Shabaabta ayaa sheegtay inay ay gubeen gaari ay wateen Ciidanka qaraxu qabsaday, welina ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Saraakiisha Ciidanka dowladda oo ku aadan qaraxaas ka dhacay duleedka Balcad.
Wadada xiriirisa Magaalada Jowhar iyo degmada ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa horey uga dhacay qaraxyo miino ah oo lagu dilay Saraakiil iyo Mas’uuliyiin kala duwan, waxaana falalkaas ka dambeeyay dagaalamayaasha Al-shabaab.